के डेल्टा प्लस भेरिअन्टले भारतमा खतरनाक तेस्रो लहर निम्त्याउछ ? विज्ञहरूले दिए यस्तो चेतावनी | समाचार
June 24, 2021 NepstokLeaveaComment on के डेल्टा प्लस भेरिअन्टले भारतमा खतरनाक तेस्रो लहर निम्त्याउछ ? विज्ञहरूले दिए यस्तो चेतावनी
कोभिड-१९ को दोस्रो लहरले एप्रिल र मे महिनामा ल्याएको प्रकोपपछि भारत बिस्तारै खुला हुन थालेको छ। तर विज्ञहरूले तेस्रो लहर अबको केही महिनामा आउने चेतावनी दिएका छन्। अदालतहरूले राज्य सरकारहरूलाई तयारीका बारेमा प्रश्न गरेका छन् भने विज्ञहरूले अबको १२ देखि १६ हप्तामा तेस्रो लहर आउना सक्ने बताएका छन्।
अन्य थुप्रैलाई भने डेल्टा प्लस भनिएको नयाँ भेरिअन्टले अहिलेको खोपलाई कमजोर तुल्याउने चिन्ता छ। डेल्टा प्लस नेपालमा पनि भेटिएको ए वाई १ भेरिअन्ट हो। भारतमा गत वर्ष पहिलो पटक भेटिएको डेल्टा भेरिअन्ट अहिलेको घातक दोस्रो लहरका लागि जिम्मेवार मानिन्छ।
तर नयाँ लहरको चिन्ता कत्तिको जायज हो? प्रकोपको लहरहरू आउनु स्वाभाविक भए पनि त्यसको खतरा र फैलावट भने धेरै कारणमा आधारित हुन्छ। तेस्रो लहरमा अहिलेको जस्तै विकराल परिस्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना नरहे पनि सतर्कता परे अपनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। अक्टोबारसम्म कोभिड १९ विरुद्ध भारतमा खोप अभियानले पाउने तीव्रताले पनि आउने लहरको अवस्थालाई सामान्य बनाउन सक्ने बताइएको छ।
सर्वेक्षणका अनुसार विज्ञहरुले भारतमा अक्टोबर देखि अर्को वर्षको फेब्रुअरीसम्म नयाँ लहरले प्रभाव पार्न सक्ने बताएका हुन्। ‘तेस्रो लहर नियन्त्रणमै रहन्छ। भ्याक्सिनेसन तीव्र गतिमा हुने भएकोले केसहरु पनि पहिलाभन्दा कम हुनेछन्। दोस्रो लहरको प्राकृतिक इम्युनिटीले पनि अवस्थालाई सामान्य रहन दिन सहयोग गर्नेछ,’ अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाका निर्देशक रन्दीप गुलेरियाले भने।
हाल भारतमा लक्षित जनसंख्याको करिब ५ प्रतिशतले मात्रै भ्याक्सिनको दुवै डोज लगाएका छन्। हाल भ्याक्सिनको अभावले पनि भ्याक्सिन प्रदान गर्ने काम प्रभावित भएको बताइन्छ। आउने दिनमा भने भ्याक्सिनको अभाव कम गर्न भारत सरकारले भारतमै उत्पादन हुने कोभिशिल्ड र कोभ्याक्सिन भ्याक्सिनको निर्माणमा जोड दिएको छ। अन्य भ्याक्सिनका साथै अरु देशबाट समेत भ्याक्सिन खरिद गर्ने तयारी भारतले गरिरहेको छ। भारतले रसियाबाट स्पुटिनिक भी भ्याक्सिन आयात गरिसकेको छ।